Faah faahin laga helayo Xatooyo lagu sameeyay Xafiiska Taliyaha Hogaanka Socdaalka Soomaaliya – idalenews.com
Faah faahin ayaa ka soo baxeysa xatooyo ah oo lagu sameeyay Qasnadii Xafiiska Taliyaha Hogaanka Socdaalka dowladda Soomaaliya Jen. C/llaahi Gaafow oo ku taala Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Wararka ku saabsanaa xatooyada lagu sameeyay qasnada ayaa aheyd arrin labadii maalmood hareysay Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo la sheegay in lacag ka badan 150-kun oo doolar lagala baxay qasnada Xafiiska Taliyaha Hogaanka Socdaalka.
Ilo wareedyo muhiim ah oo ka gaabsaday magacooda ayaa u sheegay Jowhar.com in qaabka ay u dhacday xatooyadan ay aheyd mid xeeladeysan, iyadoo aan la jebin albaabadii loo maray Xafiiska iyo qasnadii lacagta ku jirta.
Wararka ayaa sheegaya in ilaa saddex albaab loo maray halka ay taalay Qasnada, waxaana la damiyay in ka badan 10-Camero oo ku xirneyd qeybta Makreeshinka Garoonka.
Sidoo kale waxaa la leeyahay in lagala baxay Document-yo ku jiray Computero yaalay Xafiiska Taliyaha Hogaanka Socdaalka Jen. Gaafow, waxaana xiriiro lala sameeyay Taliyuhu uu ka gaabsaday arrintan inuu ka hadlo.
Arrintan ayaa loo xiray dad dhowr ah oo haatan su’aalo lagu weydiinayo Xarunta dambi baarista CID-da, waxaana jirin ilaa iyo hada war ka soo baxay CID-da ama ay ku faah faahiyeen sida ay dhacday in xatooyo lagu sameeyo Xafiiska Taliyaha Hogaanka Socdaalka, iyadoo garoonka diyaaradaha Ammaankiisa uu aad u adag yahay.
Xiriiro aan la sameynay garoonka diyaaradaha ayaa naloogu xaqiijiyay in xatooyadan layaabka laheyd ay dhacday Jimcihii, waxaase la xaqiijiyay in falku dhacay xilli galab ah, inkastoo la hadal hayay in habeenimadii jimcaha uu falku dhacay, balse waxaa la leeyahay xilliyada Habeenki waa adag tahay in Garoonka ay ku sugnaato cid aan AMISOM aheyn, shaqaalahana ay yihiin kuwo rawaxa wixii ka dambeeya 5-ta Galabnimo.
Dhacdadan ayaa noqoneysa midii labaad oo ka dhacda Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, iyadoo sanadkii hore Qasnajigii Shirkada SKA oo maamusha garoonka diyaaradaha uu la baxsaday lacag ka badan saddex boqol kun doolarka Mareykanka, inkastoo markii dambe ninkaas oo heystay baasaboor Mareykan ah, dhalashadiisa dambena aheyd Masaari lagu qabtay magaalada Nairobi, kaasoo dacwadiisa ilaa iminka socota.